एनसेलले ‘मिस युनिभर्स नेपाल २०२०’ मा सहकार्य गर्दै – Palika Express
PalikaExpress १५ पुष २०७७, बुधबार 377 पटक हेरिएको
काठमाडौं,एनसेल आजियाटा लिमिटेडले आफ्नो ‘अनपज’अभियान र ‘गो’ पहलअन्तर्गत ब्रेभ बोल्ड एन्ड ब्युटीफुल प्रालिसँग ‘मिस युनिभर्स नेपाल २०२० (एमयूएन)’ का लागि सहकार्य गरेको छ । महिला सशक्तीकरण प्रवर्द्धन गर्ने तथाआफ्ना सपना साकार पार्न अघि बढिरहेका महिलालाई सहयोग गर्ने यस सहकार्यको उद्देश्य हो । एमयूएनएक समावेशीमञ्चहो, जसले नेपालीमहिलालाई नेतृत्वदायी भूमिकामा पुग्ने गरी महिला सशक्तीकरणमा सहयोग पुर्याउने विश्वासका साथकाम गरिरहेको छ । यस सहकार्य अन्तर्गत एनसेल ‘कनेक्टेड बाई पार्टनर’को रुपमा आबद्घ भएको छ । एनसेलले हालै मात्रमहिलाकालागि ‘अघि बढौं’ भन्ने थिमका साथविषेश रुपमातयार पारिएको ‘गो सिम’प्याकल्याएको थियो । एनसेलको ‘गो’ पहलको दर्शन भनेको प्रगतिशीलमहिलालाई आफ्नालक्ष्यप्राप्तिकालागि अघि बढ्न प्रोत्साहन गर्नु हो । नेपालमै पहिलो पटक समावेशी दृष्टिकोणमा आधारित भई अगाडि बढिरहेको एमयूएनको पनियहीदर्शन छ ।
एनसेलले पुस ११ गते यही सहकार्यअन्तर्गत रही ‘मिस युनिभर्स नेपाल २०२०’ का उत्कृष्ट १८ जनामाआउन सफलप्रतिस्पर्धीसँग डा. रवीना देशराज (डेप्युटी सीईओ, मेगा बैंक), प्रियंकाकार्की (कलाकार) र पूजा रिजाल (सोलो ट्राभलर)को अन्र्तक्रियापनिआयोजना गरिएको थियो ।
प्रतियोगिताको फाइनलबुधबार साँझहुनेछ । उत्कृष्ट १८ मा छानिएका मध्येबाट एक प्रतिस्पर्धीले ‘मिस युनिभर्स २०२०’को ताजजित्न सफलहुनेछिन् । ताजसँगै विजयीले रु. २५ लाख बराबरको पुरस्कार पाउनेछन् । आकर्षक नगद पुरस्कारका साथै आयोजकहरूले विजयीलाई विश्वमाहुने यस किसिमकाप्रतियोगितामा सहभागी गराउनेछन् ।
महिलालाई लक्ष्यसम्म पुर्याउन थप सहयोग र प्रोत्साहनगर्दै सशक्तीकरणका लागि यस कार्यक्रममार्फत आबद्घ हुनपाएकोमा निकै हर्ष लागेको एनसेलले जनाएको छ । एमयूएनको मञ्चमार्फत विजयीप्रतियोगीले नेपाललाई विश्वमाझप्रतिनिधित्व गर्ने मौका पाउनेछन् भने सबै प्रतिस्पर्धीले विश्वस्तरीय कोचिङ र गु्रमिङका साथ नेटवर्किङ, बिजनेस तथाजीवनमाचाहिने विभिन्नकलाकाबारेमा सिक्ने मौका पाएका छन् ।